OnePlus 6 voatondro mivoaka | Androidsis
Sivanina ny antsipiriany feno momba ny OnePlus 6
Ny OnePlus 6 dia iray amin'ireo telefaona andrasana indrindra amin'ity taona 2018 ity eny an-tsena. Ny tapany farany an'ny marika sinoa dia ho tonga amin'ny tapaky ny taona, toy ny mahazatra ao amin'ny orinasa. Ny telefaona dia antenaina hisongadina indrindra ho azy sandam-bola be. Na dia antenaina hiakatra be koa aza ny vidiny amin'ity taona ity. Saingy zavatra mbola tsy fantatra izany.
Ny zavatra efa fantatsika momba ny famaritana ny OnePlus 6. Ny famaritana ny haavo avo lenta vaovao dia efa tafaporitsaka. Afaka mahazo hevitra mazava tsara momba ny telefaona isika. Amin'ny ankapobeny dia vitsy ny tsy ampoizina. Fa misy telefaona mahafinaritra miandry antsika.
Amin'ny sary etsy ambany dia azonao atao ny mijery izay heverina ho fika amin'ny mpanamboatra avo lenta. Ka afaka manana hevitra mazava tsara momba ny OnePlus 6 isika. Andrasana ny telefaona kalitao, izay mihoatra ny avo lenta izay natombok'ilay orinasa tamin'ny taon-dasa. Sarotra noho izany ny raharaha.
Ny telefaona dia hanana ny famaritana tsara indrindra amin'ny fotoana. Na dia ny fakantsary aza dia ny teboka malemy hatrany amin'ireo maodelin'ny orinasa. Andrasana araka izany ny hisian'ny fanatsarana lehibe amin'ity lafiny ity. Niely be ny vidin-javatra. Nefa toa izany Ny OnePlus 6 dia vidin'ny $ 600 mahery. Izany no antenaina fa hahatratra ny lahasa ilay telefaona.
Ny sary dia mampiseho ny famaritana ny haavo farany ambony an'ny orinasa. Ireo no miavaka manokana navoakany Mandrak'izao:
efijery: AMOLED 6,28 santimetatra miaraka amin'ny famaha Full HD
Fakan-tsary Rear: 16 + 20 megapixels miaraka amina vava f / 1.7
Fakan-tsary eo aloha: 20 megapixels miaraka amina aperture f / 2.0
Rafitra fandidiana: Android 8.1 Oreo
Fitahirizana anatiny: 128 GB
Misy pitsopitsony manintona ny saina, satria ny vahaolana amin'ny efijery an'ity OnePlus 6 ity dia Full HD ihany. Noho izany, mety tsy izy ireo no famaritana voafaritra amin'ny telefaona. Manantena izahay fa handre fampahalalana bebe kokoa atsy ho atsy, raha azo atao dia avy amin'ny orinasa ihany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Sivanina ny antsipiriany feno momba ny OnePlus 6
Xiaomi Mi Drop: Fametrahana amin'ny Android sy ny fomba fampiasana
Google dia manamafy fa tsy handray Android P ny Nexus Player